China Ball Mill mpanamboatra sy mpamatsy | Mets
Ny fikosoham-bary dia misy ny ampahany manome sakafo, ny ampahany manome sakafo, ny ampahany mihodina, ny ampahany ampitana (ny reducer, ny fitaovana fampitana kely, ny motera, ny fifehezana herinaratra) sns. Ny vatan-kazo lavaka dia vita amin'ny vy vy, ny fanamainana dia azo ovaina, ary ny fitaovan'ny rotary dia vita amin'ny nify mihodina amin'ny fanariana. Ny barika dia manana tabila fisoloana akanjo-mahatohitra, izay mahazaka fanoherana tsara. Milina matevina ary azo itokisana ny mpamatsy baolina, anisan'izany ny varingarina, vatan-tsolika miaraka amina lining mahasoa vita amin'ny fitafiana mahatohitra, manana sy mitazona ny fitaterana varingarin'ny fihodinana, nitondra ampahany, toy ny motera, ary ny fitaovan'ny fiara, pulley, triangle, Sns
Ny momba ny faritra antsoina hoe antsy, izay mazàna tsy singa lehibe, singa ao amin'ny tsindrin-tsoratry ny feed miaraka amina volo anatiny, dia azo lazaina amin'ny faran'ny fivoahana izay mivoaka vava amin'ny visy anatiny afaka miantso azy ireo.
Ankoatr'izay, amin'ny fitaovana fanampiana ny faran'ny famoahana, raha ampiasaina ny conveyor spiral, dia hisy ny faritra antsoina hoe glades spiral ao anatin'ireo fitaovana ireo, fa raha tena henjana dia tsy ampahany amin'ny fikosoham-bary izany. Ny milina fanaovana baolina maina sy ny fikosoham-bary dia azo alaina araka ny fomba fanaovan-jiro sy ny lalan-drano. Fikosoham-bary fitahirizana angovo, famolavolana boribory boribory indroa mandeha ho azy, kely ny fanoherana mihazakazaka, mahatalanjona ny vokatra azo avy amin'ny angovo. Ny ampahany amin'ny vatan'ny barika amin'ny barika tany am-boalohany dia nampiana vatan-tsolika, izay mampitombo ny habetsaky ny fikosoham-bary ary mahatonga ny fizarana medium amin'ny fantsona ho mitombina kokoa. Ity vokatra ity dia be mpampiasa amin'ny vy tsy ferrous, metaly ferrous, sehatry ny beneficiation tsy metaly, indostrian'ny simika ary indostrian'ny fitaovana fananganana.
Fametrahana milina baolina:
A) ny drafitra fametrahana dia namboarina mifanaraka amin'ny injenieran'ny mpampiasa ary tokony apetraka amin'ny lalana, toerana ary habaka amin'ny kisary;
B) ny fiaramanidina ambany amin'ny fuselage dia tokony ho mafy orina, ary ny fisaka amin'ny vodin'ilay varingarina dia tsy lehibe noho ny 1.5 / 1000 aorian'ny fanitsiana marindrano.
A) esory ny fitaovana avy eo am-pototry ny fitaovana fametrahana, indrindra ny rindrina anaty lavaka tsy tokony hanana vovoka, solika, rano ary ranon-javatra hafa;
B) aorian'ny famonosana ireo tranga fonosana, ny motera lehibe dia hafindra amin'ny toerana fametrahana miaraka amina toerana fananganana mety (crane / forklift);
C) apetraho amin'ny toerany ny fitaovana, ny lavaka fametahana vatofantsika, ary ny "tongotra velona" amin'ny fehikibo tsy misy fangarony dia hofehezina amin'ny chassis amin'ny frame aorian'ny fametahana azy ireo ao amin'ny chassis an'ny frame, avy eo azo atao ny fantsona faharoa;
D) aorian'ny fametrahana herin'ny simenitra 24 ora dia azo ampiasaina hanamafisana ny milina fitsapana lozam-boanjo;
E) fidirana amin'ny fahefana;
F) fanaraha-maso fametrahana sy fanitsiana ny tsy fahazoana aina;
G) Ny kabinetra elektrika dia apetraka ao amin'ny efitranon'ny motera mpanampy tsy mila mametraka gorodona.
2. Fandidiana andrana:
Ny fametrahana ny fikosoham-bolo dia vita, ny fizahana, mety ho fihazakazahana fitsapana, ny fanidiana ny fikosoham-bary ataon'ny mpandraharaha mpanao vato mahay dia tokony ho tompon'andraikitra amin'izany, fikosoham-bary ary hanaraka tsara ny fomba fiasa fiarovana.
(1) ny faharetan'ny fiasana tsy miasa dia tsy latsaky ny 12-24 ora, ary ny olana miasa dia ho voavaha ara-potoana.
(2) ny fihazakazahana tsy an-kijanona amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ny fitsapana famoahana entana mavesatra, azo tanterahina rehefa mihazakazaka ny fitsapana ny enta-mavesatra isaky ny dingana, ny fiasan'ny entana dia tokony hatao arakaraka ny toetran'ny fivoahana amin'ny sakafo, fadio ny baolina fikosoham-bary tsy ilaina ary ny valin'ny varingarina ary fahasimbana.
A) ampio ireo fitaovana ilaina sy 1/3 an'ny baolina vy (ny lanjan'ny milina fanaovana baolina) mba hanandramana mandritra ny 12 ka hatramin'ny 24 ora.
B) ampio hatramin'ny 2/3 amin'ny habetsaky ny vy vy hihazakazahana mandritra ny 24 ka hatramin'ny 48 ora.
C) araka ny fepetra famotsoran-kofehy baolina, famokarana vokatra mahafeno fepetra, miaraka amin'ny masinina mitovy amin'ny milina fanaovana milina baolina, mamaritra ny habetsaky ny milina milina baolina, mandritra ny 72 ora hazakazaka fitsapana.
(3) ny fitomboan'ny enta-mavesatra etsy ambony sy ny halavan'ny fotoana fihazakazahana fitsapana dia voafaritra mifototra amin'ny toe-javatra mihazakazaka amin'ny fakan'ny haben'ny fitaovam-piadiana sy ny fitaovana mihena (fiakaran'ny maripana, ny tabataba, ny fifandraisan'ny nify sns.). Alohan'ny tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny endriny dia tsy tokony hiasa amin'ny fahaizany feno izy.
(4) ny rafitra mangatsiaka sy manosotra dia tokony hiasa ara-dalàna amin'ny fizahana fitsapana, ary ny mari-pana amin'ny fiterahana lehibe, ny fitaterana ary ny reducer dia tokony ho ara-dalàna.
(5) aorian'ny famoahana ny 2/3 amin'ny fitsapana baolina vy mandritra ny 24 ka hatramin'ny 48 ora, zahao indray ary hamafiso indray ny baomba rehetra.
(6) ny fizotran'ny fitsarana dia tsy maintsy voarakitra tsara.
Ny fampifangaroana, ny fikosoham-bary, ny fikosoham-bary dia ampiasaina indrindra amin'ny fitaovana seramika dia fitaovana ilaina amin'ny famokarana karazana vokatra vita amin'ny seramika, ny milina dia Mampiasa ny adin-tsain'ny tsikombakomba, mampihena ny fanombohana ankehitriny, ny firafiny dia mizara ho tsy mitongilana sy misaraka. Miaraka amin'ny v-belt drive, dingana tokana na fihenam-bidy roa, miaraka amina motera kely tsy miankina mahaleo tena.
Manaraka: Kitapo lava